NYI LYNN SECK 18+ DEN: How To Get Yahoo Mail Beta
Yahoo ရဲ့ မေးလ် အသစ်ကို သုံးစွဲချင်ရင် သူတို့ ဖိတ်ခှေါတာကို စောင့်နေဖို့ မလိုအပ်ပါဘူး။ ရဟူးကို လှည့်စားပြီး ရယူဖို့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ရဟူးလ် မေးအသစ်မှာ ဘာတွေ ပိုကောင်းလာသလဲ ဆိုရင် စာတစ်စောင်ချင် ဖတ်ဖို့အတွက် ပေ့ခ်ျ တစ်ခုချင်းစိကို လုဒ်ဒင်း လုပ်စရာ မလိုတော့ဘဲ Ajax Technology နဲ့ စာမျက်နှာတွေကို ဖတ်သွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပုံစံနဲ့ သဘောတရားက Outlook Express ကနေ ကြည့်နေရတဲ့ ပုံစံနဲ့ တူပါတယ်။ RSS Feed တွေကို ထည့်သွင်းပြီးလည်း ဖတ်နိုင်ပါတယ်။ ညာဘက် ကလစ်ကိုလည်း အသုံး ပြုနိုင်မှာ ဖြစ်တယ်။ ပုံတွေဆိုလည်း အရင်ကလို ဖွင့်စရာ မလိုတော့ဘဲ တစ်ခါတည်း ပြပေးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့် မေးလ်းအကောင့်ထဲကို စဝင်တဲ့ အချိန်ကတော့ သာမန်ထက် ပိုကြာသွားပါတယ်။ စမ်းသုံးချင်တယ် ဆိုရင် အောက်ပါနည်းနဲ့ ရယူနိုင်ပါတယ်။
Log in to Yahoo Mail
Select Account information from the left panel
Go to Member Information, General Preferences, Preferred Content
Select Yahoo UK
Now go to Yahoo Mail again
You'll seeapage that says "It's the New Yahoo! Mail Beta... and you're invited."
Click on "Try Beta Now".
Via : Dig
Tags : Technology , How To Get Yahoo Mail Beta
Posted by NLS at 4/25/2006 09:42:00 AM
No response to “How To Get Yahoo Mail Beta”